Ngwaahịa na-emelite |
Ndị na-azụ ahịa C&S na-enye 100,000 KN95 masks n'ụlọ ọgwụ, na-akwado ụlọ nri
C&S Wholesale Grocers, nke kachasi ndi ahia ahia ahia na mba, na Thursday kwuputara ihe enyemaka nke mba nile n’ime agha megide oria ojoo coronavirus, tinyere ihe kariri $ 300,000 n’onyinye nke gha enye 100,000 KN95 nkpuchi na ulo ogwu na mpaghara ndi agha siri ike, dika .. .
Nwere ike chọọ okporo mmiri na mkpuchi ihu ihu: Uru na ọghọm
Akwụkwọ akụkọ coronavirus oria ojoo wetara ọha mmadụ nkọwa ọhụrụ nke nkịtị nke ugbu a gụnyere itinye ihe nkpuchi ihu. Ọ bụ ezie na uru nke masks doro anya, iji ọtụtụ ihe mepụtara ọtụtụ ihe ndọghachi azụ: iwe iwe, ike iku ume, iru mmiri na iko ndị na-atụ ụjọ. ỌZỌ: Ihu ...
Ihe nkpuchi ihu, nkpuchi N95 na ihe nkpuchi ịwa ahụ: Onye ha chọrọ na otu esi eji ha
CDC na-ekwu na onye ọ bụla kwesịrị iyi ihe mkpuchi ihu na-abụghị ọgwụ mgbe ọ bụla gị na ndị ọzọ na-emekọ ihe n’oge oria ojoo coronavirus. Ma olee otu ndị si dị iche na ihe nkpuchi ihu na ahụ ike? Ihe nkpuchi ihu abụrụla ihe a na-arụrịta ụka n'oge ọrịa coronavirus. Na-atụ egwu ...
Ihe mbu 100,000 N95 nkpuchi nke 24M biara na Los Angeles
LOS ANGELES - 100,000 nke mbụ nke 24-nde N95 masks-ọkwa nkpuchi nke obodo Los Angeles nyere iwu rutere na Thursday ma kesaa ya na ndị na-elekọta ahụike na ndị na-aza ajụjụ mbụ. “Obodo ahụ nwere ikike ịzụta ihe dị egwu, yabụ anyị tinyere ya n'ọrụ site na ịzụrụ nnukwu na obere pr ...
N95 Masks na Coronavirus: More Production n'okpuru
Iji lebara ọnụ ọgụgụ na-arịwanye elu nke ihe nkpuchi anya n'oge ntiwapụ nke ọrịa coronavirus, COVID-19, Honeywell na-agbalite ngwa ngwa na -emepụta ngwa ngwa ma na-eme nde mmadụ nde N95 masks na United States. Anyị na-agbasa arụmọrụ n'ichepụta na ụlọ ọrụ mmepụta ihe na Smithfield, Rhode Island, nke na-amịpụta ...
Dị ofdị N95 Nkpuchi nwere ike imebi ihe karịa nke ọma
Share on Pinterest Ndị ọkachamara na-ekwu na ụfọdụ N95 masks na n'ihu valves na-echebe onye ọrụ ma anaghị egbochi onye ahụ ịgbasa COVID-19 na ndị ọzọ nọ nso. Getty Images Ndị ọkachamara na-adọ ndị mmadụ aka na ntị ka ha ghara iyi ụdị ụfọdụ nke ihu ihu N95 na valvụ ihu. Ha na-ekwu na masks na-echebe ...
Nwale ma nkpuchi nkpuchi N95 amachaghị nke ọma
Kemgbe Covid-19 malitere ịgbasa na United States, gọọmentị steeti na-agbasi mbọ ike ịchọta ma chekwaa ihe mkpuchi N95 respirator, ụdị nke na-emechi ihu na ma kpochapụ ihe ndị na-efe efe, na-echebe ndị ọrụ n'ihu ka ha ghara iku coronavirus. Kọ ụkọ mba emeela ka ndị steeti ...
FDA machibidoro ihe nkpuchi, 3 Izu Mgbe Emechara Ule
Nchịkwa nri na ọgwụ ọjọọ machibidoro ndị nrụpụta 65 ire ihe nkpuchi maka ọgwụgwọ. Ma njem ahụ bịara mgbe ule ọnwa gara aga gosipụtara ihe nkpuchi ahụ ezughi ụkpụrụ. Ruo izu atọ Nchịkwa nri na ọgwụ ọjọọ kwere ka ire ọtụtụ ụdị ụdị ihu ihu N95 maka ndị America ...
Ihe nkpuchi KN95 na oria ojoo a
Dabere na websaịtị Health Canada, ọ bidoro inye ikikere iji ihe mkpuchi KN95 maka ọgwụ na ebum ọrịa ahụ oria ojoo. “Iji gbasaa nnweta nke N95 respirators n'oge ọrịa a na-efe efe, otu usoro ndị ọzọ enwere ike ịnakwere… nke a gụnyere ma ahụike ma ...
Health Canada kwuru ihe ụfọdụ masks KN95 emere na China
Masks na-enwe nsogbu 'ahụike na nchekwa,' dịka akwụkwọ akụkọ enyere ndị mbubata Geoff Leo · CBC News · Zigara: May 13, 2020 5:38 PM CT | Emelitere ikpeazụ: Mee 14 Ahụike Canada echetala ihe nkpuchi KN95 nke ọtụtụ ndị na-emepụta China mepụtara mgbe ule nyochachara ha ka ha 'bụrụ ...